အရိုးပွရောဂါကိုဖြတ်ကျော်ခြင်း | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
တစ်​သက်​လုံးလှုပ်​လှုပ်​ရှားရှား​သွားသွားလာလာ​နေလာပြီးမှ ​ ​အရိုးပွ​ရောဂါဖြစ်​လာရုံနဲ့ ကိုယ်​့​နေထိုင်​မှုပုံစံကို ​ပြောင်​းလဲပစ်​ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်​နိုင်​ပါဘူး။ အ​ပြောင်​းအလဲအနည်​းငယ်မျှ ပြုလုပ်​ရုံနဲ့တင်​ ကိုယ်​့ဘဝကို​နေ​ပျော်​​အောင်​ ​နေနိုင်​ပါတယ်​။
1. အိမ်​​လျောက်​လမ်​းနဲ့​ရေချိုးခန်​းထဲမှာ လက်​ကိုင်​​တွေတပ်​ဆင်​ပါ။
အရိုးပွ​နေသ​ူ​တွေမှာ အ​ကြောက်​ရဆုံးက ​ချော်​လဲမှာပါပဲ။ သာမန်​လဲကျရုံမျှနဲ့ အရိုးကျိုးနိုင်​ပါတယ်​။ ဒါ​ကြောင်​့ အိမ်​အဝင်​ဝ ဖိနပ်​ချွတ်​​နေရာ​တွေ၊ ​လှေကား​တွေမှာ လက်​တန်​း​တွေတပ်​ဆင်​​ပေးထားသင်​့ပါတယ်​။ ဒါမှသာ မိသားစု​တွေလည်​း စိတ်​​အေးလက်​​အေး ကိုယ်​့အလုပ်​ကိုယ်​လုပ်​နိုင်​မှာပါ။
​ရေချိုးခန်​း၊ အိမ်​သာဟာလည်​း လက်​တန်​းတပ်​သင်​့တဲ့ ​နေရာ​တွေပဲဖြစ်​ပါတယ်​။ ကြမ်​းပြင်​စိုစိစိနဲ့ စိုထိုင်​း​နေတဲ့ ​ခြေသုတ်​ခုံ​တွေ​ကြောင်​့ ​ချော်​လဲနိုင်​​ခြေများပါတယ်​။
အိမ်​ရှင်​းတာများ၊ တစ်​သက်​လုံးလုပ်​​နေတာပဲ လို့​ဆိုချင်​ကြမလား? ဒါ​ပေမယ်​့ တကုန်​းကုန်းနဲ့လုပ်​ရတာဟာ အရိုးပွရာဂါသည်​​တွေအတွက​်​​တော့ စိုးရိမ်​စရာပါ။ အထူးသဖြင်​့ ကြမ်​းတိုက်​တာ၊ ဖုန်​သုတ်​တာ စသည်​ဖြင်​့ ​လေးဘက်​​ထောက်​လုပ်​ရမယ်​့အလုပ်​​တွေကို လုံးဝမလုပ်​ပါနဲ့။ ဒါ့အပြင်​ ခုံ​ပေါ်တက်​တာ၊ ​လှေကား​ပေါ်တက်​ပြီး အလုပ်​လုပ်​တာ​တွေကိုလည်​း ​ရှောင်​ကြဉ်​ပါ။ ဒါ​ကြောင်​့ အိမ်​ရှင်​း​ပေးမယ်​့ အိမ်​အကူတစ်​​ယောက်​ကို ရှာသင်​့ပါတယ်​။
ချက်ရပြုတ်ရတာကို ကြိုက်​နှစ်​သက်​သူ​တွေအတွက်​ မီးဖို​ချောင်​ထဲစိတ်​ချရဖို့ ချက်​ပြုတ်​ရာမှာသုံးတဲ့ခုံမျိုး ဝယ်​ထားသင်​့ပါတယ်​။ သစ်​သားကြမ်​းပြင်​ သို့မဟုတ်​ ​ကြွေပြားကြမ်​းပြင်​ဆိုရင်​ ​ခြေ​ထောက်​​အောက်​မှာ မ​ချော်​​စေမယ်​့​ခြေခု​လေး​တွေ ထားလို့ရပါတယ်​။ သက်​​သောင်​့သက်​သာချက်​ပြုတ်​နိုင်​မယ်​့ ခုံမျိုးဖြစ်​ဖို့လိုပါတယ်​။ ခုံမှာအခုအခံ​တွေမထည်​့ပါနဲ့။ ပို​ချော်​ကျ​စေပါလိမ်​့မယ်​။ ဒီလိုခုံထားခြင်းဖြင်​့ ​မြေး​လေ​း​တွေနဲ့လည်​း အတူချက်​ပြုတ်​​ပျော်​ရွှင်​နိုင်​ပါ​သေးတယ်​။
တစ်​မနက်​ခင်​းလုံး ထိုင်​ရာကမထ သတင်​းစာဖတ်​​နေပါသလား? မလှုပ်​ရှားခြင်​းက လုံခြုံစိတ်​ချရတယ်​လု့ိ ထင်​စရာရှိ​ပေမယ်​့ ကျန်​းမာ​ရေးနဲ့ မညီညွတ်​ပါဘူး။ လှုပ်​လှုပ်​ရှားရှား အ​ကြောအချင်​ဆန်​့ဖို့လည်​း လိုပါတယ်​။
​ေ​လ့ကျင်​့ခန်​းလုပ်​ဖို့ အိမ်​က​နေထွက်​စရာ မလိုပါဘူး။ အိမ်​မှာ ​အ​လေးတုံး​လေး​တွေ ဝယ်​ထားပြီး ကိုယ်​့gymကိုယ်​ဖန်​တီးနိုင်​ပါတယ်​။
တဈသကျလုံးလှုပျလှုပျရှားရှားသှားသှားလာလာနလောပွီးမှ အရိုးပှရောဂါဖွဈလာရုံနဲ့ ကိုယ့ျနထေိုငျမှုပုံစံကို ပွောငျးလဲပဈဖို့ဆိုတာ မဖွဈနိုငျပါဘူး။ အပွောငျးအလဲအနညျးငယျမြှ ပွုလုပျရုံနဲ့တငျ ကိုယ့ျဘဝကိုနပြေောျအောငျ နနေိုငျပါတယျ။
1. အိမျလြောကျလမျးနဲ့ရခြေိုးခနျးထဲမှာ လကျကိုငျတှတေပျဆငျပါ။
အရိုးပှနသေူတှမှော အကွောကျရဆုံးက ခြောျလဲမှာပါပဲ။ သာမနျလဲကရြုံမြှနဲ့ အရိုးကြိုးနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောင့ျ အိမျအဝငျဝ ဖိနပျခြှတျနရောတှေ၊ လှကေားတှမှော လကျတနျးတှတေပျဆငျပေးထားသင့ျပါတယျ။ ဒါမှသာ မိသားစုတှလေညျး စိတျအေးလကျအေး ကိုယ့ျအလုပျကိုယျလုပျနိုငျမှာပါ။
ရခြေိုးခနျး၊ အိမျသာဟာလညျး လကျတနျးတပျသင့ျတဲ့ နရောတှပေဲဖွဈပါတယျ။ ကွမျးပွငျစိုစိစိနဲ့ စိုထိုငျးနတေဲ့ ခွသေုတျခုံတှကွေောင့ျ ခြောျလဲနိုငျခွမြေားပါတယျ။
အိမျရှငျးတာမြား၊ တဈသကျလုံးလုပျနတောပဲ လို့ဆိုခငြျကွမလား? ဒါပမေယ့ျ တကုနျးကုနျးနဲ့လုပျရတာဟာ အရိုးပှရာဂါသညျတှအေတှကျတော့ စိုးရိမျစရာပါ။ အထူးသဖွင့ျ ကွမျးတိုကျတာ၊ ဖုနျသုတျတာ စသညျဖွင့ျ လေးဘကျထောကျလုပျရမယ့ျအလုပျတှကေို လုံးဝမလုပျပါနဲ့။ ဒါ့အပွငျ ခုံပေါျတကျတာ၊ လှကေားပေါျတကျပွီး အလုပျလုပျတာတှကေိုလညျး ရှောငျကွဉျပါ။ ဒါကွောင့ျ အိမျရှငျးပေးမယ့ျ အိမျအကူတဈယောကျကို ရှာသင့ျပါတယျ။
ခကြျရပွုတျရတာကို ကွိုကျနှဈသကျသူတှအေတှကျ မီးဖိုခြောငျထဲစိတျခရြဖို့ ခကြျပွုတျရာမှာသုံးတဲ့ခုံမြိုး ဝယျထားသင့ျပါတယျ။ သဈသားကွမျးပွငျ သို့မဟုတျ ကွှပွေားကွမျးပွငျဆိုရငျ ခွထေောကျအောကျမှာ မခြောျစမေယ့ျခွခေုလေးတှေ ထားလို့ရပါတယျ။ သကျသောင့ျသကျသာခကြျပွုတျနိုငျမယ့ျ ခုံမြိုးဖွဈဖို့လိုပါတယျ။ ခုံမှာအခုအခံတှမေထည့ျပါနဲ့။ ပိုခြောျကစြပေါလိမ့ျမယျ။ ဒီလိုခုံထားခွငျးဖွင့ျ မွေးလေးတှနေဲ့လညျး အတူခကြျပွုတျပြောျရှှငျနိုငျပါသေးတယျ။
တဈမနကျခငျးလုံး ထိုငျရာကမထ သတငျးစာဖတျနပေါသလား? မလှုပျရှားခွငျးက လုံခွုံစိတျခရြတယျလို့ ထငျစရာရှိပမေယ့ျ ကနြျးမာရေးနဲ့ မညီညှတျပါဘူး။ လှုပျလှုပျရှားရှား အကွောအခငြျဆန့ျဖို့လညျး လိုပါတယျ။
လေ့ကငြ့ျခနျးလုပျဖို့ အိမျကနထှေကျစရာ မလိုပါဘူး။ အိမျမှာ အလေးတုံးလေးတှေ ဝယျထားပွီး ကိုယ့ျgymကိုယျဖနျတီးနိုငျပါတယျ။